WERIYE Ingiriis ‘Waxaan ahay qorrax u soo baxday saxaafadda Soomaalida, qorrax soo baxdayna sacab laguma qarin karto’
Axmed Nuur Hassan
Weriye ka mid ah weriyeyaasha waaweyn ee Soomaalida oo ah Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa muddo laba bilood ah ku sugnaa magaalada Brussels ee waddanka Belgium, wuxuuna ka yimid dhinaca Soomaaliya iyo shirka Kenya. Soomaalida Belgium ayaa aad u soo dhoweysay weriyaha, kuwaasoo uu warbixin ka siiyey arrimaha Soomaaliya.
Xaflad weyn ayaa waxaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada Ghent, taasoo lagu soo dhoweeyey. Dadkii ka soo qayb galay ayaa waxay ka kala yimid gobollada waddanka Belgium iyo gobollada Holland u dhow ee ku yaalla xuduudka Belgium. Ingiriis oo aad loogu hamuun qabay warbixinta uu ka dhiibi doono waddanka ayaa sheegay inuusan garanayn wax uu ka sheego Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo noqotay ayuu yiri meel halaq-galeen ah oo ay maamulaan qabqablayaal la mid ah maafiyada Talyaaniga siduu ku tilmaamay Nuuraddiin Faarax.
Xamar ayuu sheegay inay ku sugan tahay xaalad anfariir leh oo laga naxo, waxayna ku jirtaa halis haddii aan la helin cid u gurmata oo wax ka qabata. Gobollada kale ee dalka ayuu sheegay in Somaliland iyo Puntland ay u dhisan yihiin maamulladooda, ha xumaadeen hase samaadeen, gobollada dhexe iyo kuwa koonfurtuna ayuu yiri waxay u lug xiran yihiin qabqablayaal arxan daran (notorious warlords).
Dhinaca nabadgelyadu waddanka heerkii ugu xumaa 15 sano oo colaad ah ayuu ku jiraa ayuu yiri, noloshu waa ku adag tahay dadka caadiga ah, waxaana dusha ka saaran cadaadiska qabqablayaasha dagaalka oo dadka ku dheggan cunaha, una diiday inay hoydaan oo hergalaan.
Maxamed Ingiriis ayaa dad badan waxaa ay u garaaceen sacab markuu sheegay in Maqaalad uu dhowaan ku qoray wargeyska Herald Tribune uu kaga hadlay nolosha iyo sida ay u nool yihiin warlords-ka Soomaalidu, kuwaasoo uu sheegay inay adag tahay in nabad la helo inta ay leeyihiin garoomo iyo dekedo iyaga u gaar ah.
Waxaa la yaab leh ayuu yiri in Qaramada Midoobay ay adeegsato garoomada iyo dekedaha qabqablayaasha oo ay bixiso canshuur, taasoo lagu soo iibsado hub iyo saanad ummadda masaakiinta ah lagu sii gumaado. Qaramada Midoobay ma raalli bay ka tahay ayuu yiri in lacagtooda loo adeegsado gumaadka ummadda?
Dhinaca shirka Kenya wuxuu yiri wadammada Midowga Yurub oo siyaasaddoodu ku eg tahay inay lacag uun bixiyaan iyo Mareykanka oo gebi ahaanba gadaal ka istaagay shirkaas ayaa ragaadisay in shirku noqdo mid mira dhal ah, mana guuleysan doono shirkaas illaa iyo inta la diiddan yahay talo soo jeedinta Mareykanka.
Shirka Kenya ayuu yiri inkastoo uu xoogaa rajo yar leeyahay haddana waxaa weli muuqata in la is waafajin la’ yahay laba arrimood oo aan is qabsan karin oo ah danta shaqsiga ah (individual interest) iyo tan guud ee Qaranka (common national interest), taasna waxaa caddeynaysa in wixii danta dalku ku jirto aan la raacaynin ee lagu socdo qancinta shaqsiyaad dantooda ka dhex arka fowdo iyo shuruudo.
Qabqablayaasha dagaalka iyo dowladda ku meel gaarku waxay diideen oo iska indha tireen talo soo jeedintii Mareykanka ee ahayd inaan laga badin tirada Baarlamaanka 200 oo xildhibaan maadaama aysan xamili karin tiro ka badan, waxayna rabaan ayuu yiri in la dhiso Baarlamaan ka kooban 450 oo macnihiisu yahay ha furnaado, hana jaantaa rognaado oo ay adkaato in la is fahmi waayo oo qofka iyo wuxuu sheegayo la kala garan waayo.
Maxamed Xaaji Ingiriis wuxuu sheegay in shirka Kenya la saadaalinayo haddiiba doorasho ka dhacdo laba Cabdullaahi inay ku guuleystaan midkood oo ah Cabdullaahi Axmed Caddow iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Muuse Suudi waan maqlay ayuu yiri inuu is sharraxay, laakiin rajadiisa ma hubo. Laakiin laba Cabdullaahi ayuu yiri primary aftiyeed oo aan sameynay aniga iyo rag u kuurgalayaal ah (analysts) waa isku ag dheceen ayuu yiri, waana laba nin oo odoyaal ah ayuu sii raaciyey.
Intaas kaddib waxaa la weydiiyey su’aalo fara badan oo uu mid mid uga wada jawaabay. Mar la weydiiyey inuusan hadda saxaafadda ku ahayn sidii hore wuxuu yiri ‘waxaan ahay qorrax u soo baxday saxaafadda Soomaalida, qorrax soo baxdayna sacab laguma qarin karo, gaaladu waxay ii saadaaliyaan inaan ahay hoggaamiyihii mustaqbalka dhow ee saxaafadda Soomaalida.’ Su’aalihii dadku weydiinayeen ayaa u badnaa kuwo siyaasadeed iyo kuwo xog-doon ah.
"Waddankeyga waxaan ku badbaadiyey faro ciddi leh markii la damcay in dalka la duqeeyo iyadoo Mareykanku ku xiriiriyey hoy inuu u noqday Bin Laden (Safe haven), iyadoo warbaahintu buunbuuninayso qatar been abuur ah ayuu yiri, waxaanan hor istaagay ayuu yiri in dalka loo baa bi’iyo sida Ciraaq.
Dhibaatada waddanka weli ka sii socota ayuu ku jawaabay waa dhaxalkii majixinjixe Maxamed Siyaad Barre iyo kuwii ka soo hoos shaqeeyey iyo qabqablayaasha dagaalka (the Mohamed Siad Barre of our generation) oo noqday kud ka guur oo qanjo u guur, iyadoon maanta la ogeyn ayuu yiri meel lagu ogyahay taariikhdii keydsanayd ee Soomaaliya iyo wax walba oo dalku lahaa.
Isagoo bixinaya jawaab sida Soomaalida isku beddeli doonto, wuxuu yiri rajo fiican ayaa ii muuqata in adduunku garawsaday qaabka ugu habboon ee Soomaaliya lagu heli karo loogana hortegi karto argagixisadu inaysan gabbaad nabadeed ka helin waddanka maadaama dowlad dhexe aysan ka jirin oo ah in lagu sandulleeyo nimanka waddanka kala xir-xirtay inay oggolaadaan marka hore maamul ay ku mideysan yihiin, kaddibna doorashooyin la qabanqaabiyo.
Calaamadaha hadda aan arkayno nagama farxinayaan, laakiin is beddel ayaa soo dhow si kasta ha ku yimaaddee. Soomaaliya Alley leedahay, Ilaahayna wuu nala garab geli doonaa waxa aan higsanayno, laakiin waa in Soomaalida dibadda ku nool ay ogaataa ayuu yiri inay door weyn ku yeelan karto is beddel kasta oo dalka ka dhacaaya.